Turkiga: Sanad-guuradii Afraad ee Inqilaabkii Fashilmay - Tilmaan Media
Maantoo kale afar sano kahor 15 bishii Luulyo 2016 waxaa Turkiga kadhacay inqilaab fashilmay oo qayb ciidanka kamid ah ku kaceen. Iskudayga inqilaab waxaa ku dhintay dad gaaraya 250 halka ay ku dhaawacmeen illaa 2,000 oo qof. Waxaa la weeraray oo dhibaato soo gaartay xarumo dawladeed oo uu kamid yahay dhismaha Baarlamanka.
Dalka Turkiga maanta oo kale sanadkasta waa la xusaa waxaana loo aqoonsaday inay tahay maalin fassax rasmi ah. Dadka ayaa banaanada isu soo baxa waxaana laxusaa dadkii ku dhintay, kuwii dhaawacmay iyo waliba kuwii sameeyay nafhurnimada si ay u hor istaagaan ciidanka.
Inqilaabka ayaa waxaa kadambeeyay sida dowladdu sheegtay kooxda loo yaqaan Hizmet ee uu hogaamiyo wadaadkanFethulla Gulan oo haatan ku sugan carriga Maraykanka. Kooxdaan waxay awood badan kulahaayeen hayadaha dowladda sida Millatariga, Sirdoonka, Booliska iyo Garsoorka.
Dowladda uu hogaamiyo madaxwayne Erdogan ayaa qaadday tallaabooyin kooxdaan looga sifaynayo hayadaha dowladda, waxaana xabsiga loo taxaabay tobanaan kun oo qof oo kooxdaan katirsan. Sidoo kale kooxda Hizmet ayaa loo aqoonsaday in ay tahay Argagixiso.
Tallaabooyinka kadhanka ah Jamaacada Hizmet ee ay qaaday dowladda Turkiga ayaa xumaysay xiriirka Turkiga iyo reer galbeedka. Turkiga ayaa ku eedeeyay in reer galbeedku iska indhatirayaan falalka aragagixiso ee kooxdaan ku kacday iyaga oo gabbaad siiya xubno kooxda katirsan.
Dhanka kale xiriirka Turkiga iyo Maraykanka ayaa sii xumaaday, kadib markii Maraykanku diiday in uu Turkiga usoo gacan galiyo Hogaamiya kooxda Fethulla Gulan.
Gudaha Turkiga Inqilaabka fashilmay wuxuu katagay saamayn siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale oo xoog badan iyo dood la xiriirta heerka ay marayaan dimuqraadiyadda iyo xuquul insaanka. Inqilaabka fashilmay kadib Turkigu wuxuu qaattay nidaam madaxwaynenimo wuxuuna kasoo guuray nidaamkii Baarlamanka ku dhisnaa.
Inkasta oo dhamaan dhinacyada kala duwan iyo siyaasadda Turkigu ay isku meel oga soo wada jeedsadeen haddana axsaabta ugu waawayn mucaaradka ayaa ku eedeeya xisbiga talada haya ee AKPARTI in ay iskudayga inqilaab uga faaiidausteen sidii ay awoodooda siyaasadeed u xoojin lahaayeen.
Marka la,eego isbadallada la sameeyay iskudayga inqilaab kadib sida dib u habaynta lagu sameeyay maamulka iyo qaabdhismeedka ciidanka iyo meel marinta sharciyada xoojinaya dimuqraadiyadda dad badan waxay rumaysan yin Turkigu kagudbay xilligii uu khatarta ugu jiray inqilaab millatari.